5BB Broadband သည် Global Technology Company Limited ၏ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ် (Service Brand) ဖြစ်ပါသည်။ 5BB Broadband အမှတ်တံဆိပ် ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အင်တာနက်ဖိုင်ဘာ နှင့် 4G/LTE နည်းပညာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံး FTTH (Fiber to the home) ဝန်ဆောင်မှုကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ (၁.၂) သန်းသော အိမ်ထောင်စုများမှ (၆) သန်းသော သုံးစွဲသူများထံသို့ အရောက် ပို့ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး၊ လိုင်းအထက်အကျ အနည်းဆုံးနဲ့၊ အမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှု မျိုးဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး ၊ ပဲခူး ၊ ပြည် နှင့် မော်လမြိုင် အစရှိသော စီးပွားရေး အချက်အချာကျသည့် မြို့ကြီးများ၌ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါသည်။ 4G/LTE ကွန်ယက်သည် နေပြည်တော် ၊ မော်လမြိုင် ၊ ပဲခူး ၊ ပြည် ၊ ဘားအံ ၊ မကွေး ၊ သထုံ နှင့် ကျိုက်ထို စသော မြို့များ၌ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၅) သန်း မှ လူဦးရေ စုစုပေါင်း (၂၅) သန်း ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
5BB Broadband သည် မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်နေသည့် Broadband ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ၊ ပြည်တွင်းရှိ စီးပွားရေးအချက်အချာကျသော မြို့အသီးသီး၌ သတင်းအချက်အလက် ကွန်ယက်များနှင့် အင်တာနက် အခြေခံအဆောက်အဦများကိုလည်း အခိုင်အမာ ဖြန့်ကျက် တည်ဆောက် ထားပြီးဖြစ်သည်။
5BB Broadband အနေဖြင့် ရည်မှန်းချက်ကောင်းများဖြင့် အစဉ်တစိုက်ကြိုးစားလာရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၃) ရက်နေ့တွင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန မှ International Gateway Services (IGW) ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအားတရားဝင်စီးပွားဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းအနေဖြင့် International Gateway Services (IGW)	ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း	လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသောကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
5BB ၏ ထူးခြားသော အားသာချက်များဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းရှိ ဒေသအသီးသီး၌ သုံးစွဲသူများအတွက် လျင်မြန်လွယ်ကူစေရန် ဖွင့်လှစ်ပေးထားသည့် ဌာနပေါင်းများစွာ နှင့် ငွေကြေးပေးဆောင်ရန် နည်းစနစ်များစွာတို့ကို အသုံးပြု၍ မိမိတို့၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၏ တန်ဖိုးနှင့် အရည်အသွေးကို မြှင့်တင် ပေးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို ဖန်တီးဆုပ်ကိုင်နိုင်ရုံ သာမက ၊ သုံးစွဲသူများအတွက်လည်း ထူးခြားသော အတွေ့အကြုံသစ်များကို ပေးစွမ်းသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
5BB Broadband ‘s Vision
Global Technology မှမွေးဖွားလိုက်သည့် 5BB Broadband ၏အမည်တွင် ရည်မှန်းချက် (၅)ရပ် ပါရှိပါသည်။
အင်တာနက်ဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းရေး (Affordable Price)
မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ဖြစ်ရေး (High Speed Broadband Internet)
ချွေတာရန်မလိုသည့် အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက်ဖြစ်ရေး (Unlimited Data)
ရန်ကုန်မြို့တွင်သာမက အခြားဒေသများတွင်ပါ အင်တာနက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိရေး (More Coverage)
အင်တာနက်သာမက အင်တာနက်အခြေပြုဝန်ဆောင်မှုများ ပေါများလာစေရေး (Beyond Internet)
စသည့်ရည်မှန်းချက်များဖြင့် အများပြည်သူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးသည် ကုမ္ပဏီ၏ အသက်သွေးကြောတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။
5BB Broadband ‘s Mission
ကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ လွှမ်းခြုံမှုပိုမိုရရှိရန်နှင့် လူနေမှုဘ၀ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန် သောနေထိုင်မှုဖြစ်စေရန် ပံ့ပိုးကူညီသွားပြီး သုံးစွဲသူများအတွက်လည်း ထူးခြားသော အတွေ့အကြုံသစ်များကို ပေးစွမ်းသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
5BB Broadband (Global Technology Company) isaleading player in Myanmar’s telecommunications, media and technology industry founded in 2002. Launched in 2017, 5BB Broadband’s core technologies include fiber and 4G/LTE. The service provider is committed to offerareliable, stable and fast service, with the largest FTTH (Fiber to the home) in Myanmar, an enhanced network that covers6million people and 1.2 million households across the country, including Naypyidaw, Yangon, Mandalay, Bago, Pyay and Mawlamyine. Its 4G/LTE network is also available in Naypyidaw, Mawlamyine, Bago, Pyay, Hpa-an, Magway, Thaton and Kyaikhto covering 25 million people and5million	households.
5BB Broadband is the leading Broadband service in Myanmar market. Information networks and Internet infrastructure have been firmly established in each of the country's key economic hubs.
5BB Broadband (Global Technology Company) has Five Visions;
AFFORDABLE PRICE - Providing our services with the most affordable price to our customers.
HIGHSPEED BROADBAND	INTERNET- To be Highest speed internet with stable connection.
UNLIMITED DATA- To enjoy unlimited data usage and dont be afraid for download process.
MORE COVERAGE- To get our services in more Coverage	of Myanmar.
BEYOND INTERNET -To improve internet and internet-based services and beasmart living with our services.
We also promise to get our services in more Coverage of Myanmar and beasmart living with	our	services. Our commitment to delivering exceptional service for every customer is rooted inapersonal approach to doing business. It’s what our people know and do best.